Studio 113 - Ebene Square Apartments in Ebene - I-Airbnb
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Avish
U-Avish Ungumbungazi ovelele
Inombolo yelayisensi ye-TAC: 14756
IStudio 113, i-Ebene Square Apartments, i-Ebene itholakala e-Ebene. Ifulethi, elakhiwe esakhiweni esiqala ngo-2018, line-WiFi yamahhala.
Ifulethi linekamelo lokulala eli-1, igumbi lokugezela eli-1, indawo yokuhlala nekhishi. I-TV ye-flatscreen ifakiwe.
I-Studio 113 inikeza ithala.
I-Studio iyifulethi leSitudiyo eliklanywe kahle elinikezwe ukuzwela kweScandinavia/Nordic.
Leli fulethi linekhishi elihlome kahle, umshini wekhofi we-Nespresso, indawo yokudlela, umbhede ophindwe kabili, indawo yokuhlala, i-smart TV enamashaneli asekhaya nakwamanye amazwe, i-Netflix yamahhala, i-WIFI yamahhala, i-balcony encane yangaphandle, umshini wokuwasha/womisa, kanye indlu yangasese yangasese neshawa, nendawo yokupaka emboziwe/evikelekile.
I-studio nayo ifakwe ngokugcwele isicoci se-vacuum nemishini yokuhlanza. Asihlinzeki ngokuhlanza ngesikhathi sokuhlala kodwa amalungiselelo angenziwa nezindleko ezengeziwe. Umqondo uwukunikeza izinsiza ezisezingeni eliphezulu ngokubukeka kwehhotela nokuzwakala ngentengo engabizi kakhulu.
I-Studio e-Ebene Square Apartments isendaweni ekahle endaweni ethule eduze nedolobha lase-Ebene Cyber, Quatre Bornes, Trianon, Reduit, imizuzu eyi-10 yokuhamba ibanga ukuya eRose Hill, izitolo ezinkulu zezitolo (Bagatelle Mall, La City Trianon & Phoenix Mall).
Njengoba imaphakathi nesiqhingi, nakuba ifinyeleleka kakhulu emabhishi amaningi amakhulu, izindawo ezikhangayo zendawo, Isikhumulo sezindiza kanye nenhloko-dolobha, iPort-Louis, ifinyeleleka ngoxhaxha lwemigwaqo ehlelwe kahle, lindela ukuba ekuseni/ traffic ntambama ngenxa yemisebenzi yebhizinisi e-Ebene Cyber City.
I-Ebene Square Building ihlinzeka ngemakethe encane esizeni, ikhemisi kanye nezitolo zokudla ezisezingeni eliphansi le-Ground Floor.
Isivakashi singangithinta noma nini ngomlayezo.
UAvish Ungumbungazi ovelele